शेयर बजारमा कहिले देखिएला प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत ?
काठमाडौं, असोज ११ : यो साता नेप्से परिसूचक ११५५ दशमलव ३० बिन्दुमा खुलेको थियो भने ११५७ दशमलव ९० को ‘इन्ट्राडे’ उच्च बिन्दु बनाएको थियो।
त्यसैगरी, ‘इन्ट्राडे’ न्यून बिन्दु ११२८ दशमलव ४४ थियो भने बजार ११२९ दशमलव ८१ बिन्दुमा बन्द भएको थियो। यो अघिल्लो साताभन्दा २५ दशमलव ४९ अंक अर्थात २ दशमलव २१ प्रतिशतको गिरावट हो।
यो साता पाँच कारोबार दिनमा १ अर्ब १ लाख बराबर रकमको शेयर कारोबार भएको छ। यो अघिल्लो साताभन्दा ४७ दशमलव ०६ प्रतिशतको गिरावट हो।
विगत ६ महिनादेखि बजारको उतारचढाव कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। गत ४ महिनादेखि बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ। यो साताको मैनबत्तीले वियरिस मारुबोजु आकृति बनाएको छ। यसले बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ। तर, परिमाणले भने बजार घटे पनि विक्रेता कम संख्यामा रहेकोे संकेत गरेको छ। यसलाई सकारात्मक मानिन्छ।
चित्र नं. २, गत तीन महिनादेखि बजार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई दैनिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। नेप्से हालसम्म घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको र हाल ११२० को टेवा क्षेत्र नजिक रहेको देखिन्छ। २१ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए) भन्दा बजारको प्रवृत्ति तल रहेकाले बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ३३ दशमलव ५७ अंकमा रहेको छ। आरएसआईको प्रवृत्ति हाल प्रभावकारी देखिँदैन। स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले बजारमा शेयर बढी विक्री हुन थालेको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : हालसम्म नेप्सेको प्रवृत्तिहरु र सूचकहरुले बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गरेको छ। समग्रमा हालसम्मको बजारलाई हेर्दा यदि बजार ११५० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजारले प्रारम्भिक सकारात्मक संकेत दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र अर्को तत्कालीन प्रतिरोध ११८० र १२०० मा रहेको देखिन्छ। तर, यदि बजार ११२० भन्दा तल रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
Published Date: Saturday, 28th September 17:23:58 PM